Ihe kacha mma GW14T16 Multi-head Combination Weigher Manufacturer and Supplier | AHO
GW Series Multihead Weigher adabara maka ịlele tii, mkpụrụ, kọfị kọfị, agwa bekee, mkpụrụ vaịn, akụrụngwa na ihe nrụpụta PW. nwere nnukwu ebumnuche.
Ndị isi dị iche iche bụ ngwaọrụ nwere onwe ha, nke a na-etinyekarị na igwe nkwakọ ngwaahịa ma soro ha rụọ ọrụ. Isi ọrụ nke ngwaọrụ dosing bụ nkewa nke ngwaahịa ahụ n'ime usoro ndị akọwapụtara, nke ndị ọrụ igwe na-edozi. A na-enyezi ọgwụ ndị a na-eji akwadebe ihe ndị dị njikere eme ihe.
Usoro ọrụ nke multihead weighers:
Dị ụdị ngwaọrụ a nwere ike iji mee ihe maka ngwaahịa ngwaahịa ọ bụla na ngwaahịa ndị ọzọ na steeti siri ike, gụnyere ndị nwere ọdịdị geometric na-adịghị agbanwe agbanwe. N'ozuzu, multihead nwere ọwa dị egwu, nke na-eri nri dị elu na ngwaahịa. A na-agbakwunye hoppers na ịdị arọ, nke na-atụle ịdị arọ nke ngwaahịa ahụ. N'adịghị ka linear weighers, ebe set set nke dose a na-enweta site na ibutu nke otu hopper na mulihead ọbọ otu dose site na ibutu nke ọtụtụ hoppers n'out oge Ndị a na ụdị dosing usoro na-onwem na a pụrụ iche algọridim nke achọpụtazi nke ukwu nke ngwaahịa a na hopper ọ bụla ma họrọ ezigbo njikọta nke ga-ebutu ngwaahịa ahụ na igwe nkwakọ ngwaahịa. Zọ a, a ukwuu arụmọrụ na nkenke nke dosing na-enweta. Multihead bụ naanị ngwaọrụ dosing nke nwere ike ịkwado oke nkenke mgbe ị na-azụ ngwaahịa, ebe ịdị arọ nke otu granule / unit karịrị 5-6 g.
Kwesịrị ekwesị maka dosing nke ngwaahịa ọ bụla granulated na steeti siri ike, gụnyere ngwaahịa nwere ụdị ọdịdị geometrical. Ngwunye multihead dị ezigbo mkpa maka ịrụ ọrụ na ngwaahịa, ebe ịdị arọ nke otu mpempe karịa 5-6 g. Enwere ike iji biskit, mkpụrụ osisi a mịrị amị, ato uto, obere waffles, ngwaahịa oyi, jelii, pasta, nri nri, granola, ibe, akụ, crackers, mini-croissants, blanket fries
Main Function & Atụmatụ:
1. Professional dijitalụ erikpu modul maka elu kpọmkwem na ezi kwụsie ike.
2. Usoro nchịkwa: MCU ma ọ bụ PLC (nhọrọ).
3. Ihuenyo mmetụ ihuenyo nwere ọkwa dị iche iche nke nnweta ikike; ruo asụsụ 16 dị iche iche maka nhọrọ; software ngwa kwalite site USB.
4. Factory oke mgbake ọrụ; Ihe ntinye ederede 99 ka izute ihe di iche iche choro.
5. Na-erikpu hopper ike ihapu n'aka na n'ụzọ dị irè iji gbochie ngwaahịa si igbochi.
6. Igu arọ ma gụọ ọrụ iji gboo mkpa dị iche iche sitere na ndị ahịa.
7. Real-ti m ngosipụta nke njupụta nke ọ bụla vibration pan yana ngwaahịa arọ na onye ọ bụla hopper ka mma nyochaa ọsọ ọnọdụ nke igwe.
8. Igwe igwe na SUS304 / 316 maka nhọrọ; IP65 ájá na nhazi mmiri.
9. Nhicha ọrụ: ike ime ka hoppers na-emeghe ala maka mfe kwa ụbọchị nhicha na mmezi.
10. Modular imewe nke akara usoro maka mfe mmezi na-eri-azọpụta.
11. Kpọmkwem mere maka obere granular ngwaahịa na elu nkenke na ngwa ngwa na-arụ ọrụ ọsọ.
12. Kọmpat size maka ohere ịzọpụta.
Ihe owuwu Igwe anaghị agba nchara AISI 304
Arụpụtaghị 65/120 doses kwa nkeji
.Gbọala Igwe ọkụ eletriki DC + usoro moto
Dosing nso 10-800g
Njikwa MCU, Ihuenyo mmetụ aka
Eziokwu ± 0,1-1g
Ike arụnyere 1500W / 2000W
Ịnye ọkụ 220V ± 10%
Ibu ibu 370 / 450kg
Asụsụ akwadoro Bekee
Ike inwe ikike 1,6L (2,5L nhọrọ)
Thedị nke cone kewawanye Omume ma ọ bụ ntụgharị
Nke gara aga: GW10T16 Multihead Weigher
Osote: GW14T25 Multihead Weigher